मृगौलाको संपूर्ण डायलाईसिल निःशुल्क गर्न अस्पतालहरुलाई परिपत्र
कात्तिक - २२ । मृगौलाका विरामीहरुलाई आवश्यक पर्ने संपूर्ण डायलाईसिस निःशुल्क भएको छ । यसअघि हप्तामा दुई पटक मात्रै निःशुल्क डायलाईसिसको व्यवस्था गरिएकोमा अव देखि जति पटक आवश्यक पर्छ त्यति पटक ...
बाेन म्याराेकाे प्रत्याराेपण गर्न खुसी अमेरिका प्रस्थान, भन्छिन : 'आएपछि छुटेको पढाइ सुरु गर्नुछ'
कात्तिक २१ । हँसिलो अनुहार, रचनात्मक क्रियाकलाप अनि दरिलो आत्मविश्वास भएकी १२ वर्षीया विधि पूरी ‘खुसी’ लाई भेट्ने जो कसैले उनलाई केही भएको होला भन्ने कल्पना गर्न पनि सक्दैनन् । आफू रक्त ...
यसकारण खुइलिन्छ तालु
उमेर ठूलो होस् या सानो, नव जवान युवालाई पनि तालु खुइलिने समस्याले सताइरहेको हुन्छ । धेरैले तालु खुइलिनुलाई बुद्धि र विवेकको क्षमतासँग दाँज्ने गरेका छन् । तर, यो वास्तविकता भने होइन ...
स्लिम हुन खोज्दा उल्टो मोटाउँदै त हुनुहुन्न ?
एजेन्सी – स्लिम बन्ने इच्छा हर कोही मानिसमा हुन्छ । फ्यात्त बाहिर निस्किएको भँुडी र लुगा लगाउँदा बाहिर निस्किने मासु देखिनुभन्दा स्लिम बन्नु नै उचित हुन्छ । स्लिम शरिरमा कपडा लगाएको ...
‘कतै मलाई त छैन स्तन क्यान्सर ?’ स्तन फाल्न विवश चर्चित अभिनेतृको तपाईलाई सुझाब
हलिउडकी चर्चित अभिनेत्री एन्जेलिना जोलीको बक्षस्थलमा जोकोहीको आँखा ठोकिन्थ्यो । उनले लगाउने लुगाले उनको सुन्दर बक्षस्थल अझ कामुक देखिन्थ्यो । क्यान्सरले पनि उनको उनको स्तनमा आँखा लगायो । जोली आफ्ना दुबै ...
बिपीदेखि सुजातासम्म क्यान्सर ! क्यान्सर कतै वंशाणुगत त होइन ?
कात्तिक – २० । कोइराला परिवारमा क्यान्सर बंशाणुगत रोग जस्तै भएको छ । कृष्णप्रसाद कोइराला र दिव्या कोइरालाका सन्तान सबैको क्यान्सरकै कारण निधन भयो । कोइराला परिवारका अन्य सदस्यहरुलाई झै कृष्णप्रसादकी ...
यस्ता कार्य गर्नाले बढ्छ उक्त रक्तचाप, यसरी मुक्त हुनुहाेस्
कात्तिक २० । सामान्यतः उक्त रक्तचापका मुख्य कारण तनाव, रक्सी तथा चुरोट सेवन्, खानपान र शारिरिक निस्क्रियतालाई लिइन्छ । सयमा दस प्रतिशत जतिलाई औषधीको प्रयोगका कारण पनि उक्त रक्तचाप हुन्छ । ...
चामलको चौलानी फाल्नुहुन्छ ? हेर्नुहोस् यस्तो छ यसका फाइदा
सामान्यतः धेरै मानिसहरुले खाँना पकाउँदा चामल पखालेको पानी फाल्ने गर्छन् । उक्त पखालिएको पानीलाई चौलानी पानी भनिन्छ । हामीले फाल्ने गरेको उक्त चौलानी पानीका फाइदा यस्ता छन् । विहान उठेर चौलानी पानी ...
चर्चित कलाकार मुलाको सागलाई हर्टएट्याक !
कात्तिक १८ । चर्चित हास्यव्यंग्य कलाकार मुलाको साग भनेर चिनिने सुरेन्द्र केसीलाई हर्टएट्याक भएको छ । हिजो साझ एक्कासी हर्टएट्याक भएर उनी गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा उपचार गराईरहेका छन । उनको स्वास्थ्यमा ...
चितवनका ८ सय २ घर डेङ्गु प्रभावित
कात्तिक – १७ । चितवनको भरतपुर र रत्ननगरको बजार क्षेत्रमा ८ सय २ घर डेङ्गु पोजेटिभ पाइएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनले चलाएको डेङ्गु रोग लगाउने लामखुट्टेको बासस्थान खोजेर लार्भा ...
जवान देखिन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी ५ तरिका
स्वास्थ्य/काठमाडाैँ उमेर बढ्दै गएपछि शरिर पनि बुढो देखिदैँ जान्छ । सुन्दर अनुहार चाउरी पर्दै जान्छ । तर यसरी चाउरी पर्दै र शारिरिक रुपमा बुढो देखिदैँ जानु कोही मानिसको इच्छा हुँदैन । ...
कैदीमा छाला रोगको प्रकोप फैलियो
कात्तिक - १७ । चितवनको भरतपुरस्थित जिल्ला कारागारमा छाला रोगको प्रकोप फैलिएको छ । क्षमताभन्दा बढी कैदी र थुनुवा रहेको भरतपुर कारागारमा दाद, छाला चिलाउने, विभिन्न बिबिरा आउने तथा एलर्जी देखिएको कारागारका ...
कात्तिक - १७ । भारतको एक सरकारी अस्पतालले ५० बिरामीको मुटु प्रत्यारोपण गरेर नयाँ कीर्तिमान रोखेको छ । अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान (एम्स)ले ५० जना बिरामीको मुटुको प्रत्यारोपण गरेको हो । ...
नेपालगञ्जमा डेङ्गु र स्क्रब्स टाइफस रोगको सङ्क्रमण बढ्दै
स्वास्थ्य/नेपालगञ्ज कात्तिक - १६ । नेपालगञ्जमा डेङ्गु र स्क्रब्स टाइफस रोगको सङ्क्रमण बढ्दै गएको पाइएको छ । नेपालगञ्जस्थित भेरी अञ्चल अस्पताल र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा ७० जनाभन्दा बढी स्क्रब्स टाइफस ...
धर्मले जे भनोस्, स्वास्थ्यका लागि गहुँत ‘डेन्जर’ नै रैछ
कात्तिक १५ । हिन्दु धर्म परम्परामा हरेक धार्मिक तथा सामाजिक संस्कारहरुमा गाईको गहुँतप्रयोग गर्ने चलन छ । मानिसहरु चोखो तुल्याउन होस् या अन्य बैदिक विधिको लागि गाईको गहुँत आवश्यक हुन्छ । मानिसहरु ...
कब्जियत रोगबाट बच्ने ७ घरेलु उपाय
जीवन रशैली कब्जियत साझा स्वास्थ्य समस्या हो । यसले पेटमा गम्भीर गडबडी भएको संकेत गर्छ । सबै उमेरका मानिसमा देखिने यो रोगबाट विशेषगरी वृद्धवृद्धा पीडित छन् । कतिपय कब्जियतपीडित चिकित्सकको औषधि खाइरहेका ...
धादिङमा २५ स्थानकाे पानीका मुुहानमा हैजाका कीटाणुु
कात्तिक १४ । उपभोक्ताले उपभोग गरिरहेको मुहानकै पानीमा हैजाको कीटाणु भेटिएको छ । दक्षिणी धादिङको थाक्रे र नौबिसे गाविसमा पानी परीक्षण गर्दा मुहानमै हैजाको कीटाणुु भेटिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख जीवन ...
अखाद्य वस्तु हालिएका र प्रदूषित एकसय ६० किलो मिठाई बरामद
कात्तिक - १३ । तिहार शुरु भइरहँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुगमन टोलीले अखाद्य वस्तु हालिएका र प्रदूषित अवस्थाका एकसय ६० किलो मिठाई बरामदपछि नष्ट गरेको छ । अनुगमन टोलीले जिल्लाका स्थानका मिठाई ...
मानसिक स्वास्थ्यमा चाड पर्वको महत्व, तिहार झनै महत्वको चाड
- गोपाल ढकाल/ मनोविद सबै चाडपर्वहरूले खुशीयाली र उमंग लिएर आउने गर्दछन् । आफन्त ,साथीभाइसगँको भेटधाटले मानिसमा भएको निराशा , एक्लोपन हटाउछ । आपसी प्रेम , भाइचारा , सदभाव बढाई शान्ति , ...
होशियार ! चुइंगम भनेर ब्वायफ्रेन्डले यौन उत्तेजना बढाउने औषधि खुवाउलान्
सिनामंगल स्थित सडकमा कम चहलपहल थियो । मध्यान्हको घामका कारण मानिसहरु उतिसारो सडकमा थिएनन् । त्यही नजिकै रहेको एउटा औषधि पसलमा एक युवक पसलेसँग जोडतोडले कुरा गरिरहेका थिए । ‘जे पायो ...